ကိုဗစ်ကာလကြီးအား အိမ်မှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းပြီးကလေးထိန်းနေရင်ြး​ဖတ်​သန်း​နေရရှာတဲ့​ ​ဖေ​ဖေမြင့်မြတ်ရဲ့အခွီးဗီဒီယိုဖိုင်​လေး (ရုပ်​သံ) – Maythadin
ကိုဗစ်ကာလကြီးအား အိမ်မှာ Live လွှင့်ဈေးရောင်းပြီးကလေးထိန်းနေရင်ြး​ဖတ်​သန်း​နေရရှာတဲ့​ ​ဖေ​ဖေမြင့်မြတ်ရဲ့အခွီးဗီဒီယိုဖိုင်​လေး (ရုပ်​သံ)
မင်းသားချော မြင့်မြတ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ထိပ်တန်းမင်းသားအဖြစ် အောင်မြင်မှုရရှိနေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကနာမည်ကြီး​နေ​သော
အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပီပီ အလုပ်တွေကို နားရက်မရှိလုပ်ကိုင်နေရပေမယ့်သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးအပေါ်မှာတော့ တာဝန်ကျေပွန်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းတွေ ရပ်နားထားချိန်မှာတော့ မြင့်မြတ်က
မိသားစုကိုသာ ပိုမိုအချိန်ပေးဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်က ညဘက်တွေမှာဆိုရင် Live လွှင့်ဈေးရောင်းရင်း ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့​လေ့ရှိသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မြတ်က အလုပ်အရဈေးရောင်းနေပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်မှာလည်းသားလေး မြတ်သူကိုထိန်းရင်း မအားမလပ်နိုင်ဖြစ်နေတာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ မြင့်မြတ်ရဲ့သားလေးမြတ်သူကလည်းဖေဖေ့အနားကိုအရမ်းကပ်သူလေးဖြစ်ပြီး
အဖေချစ်သားလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်းမြင့်မြတ်တို့သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ခရက်​ဒစ်​
မငျးသားခြော မွငျ့မွတျကတော့ အနုပညာလောကမှာ ထိပျတနျးမငျးသားအဖွဈ အောငျမွငျမှုရရှိနသေလို တဈဖကျမှာလညျး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွငျ့မွတျကနာမညျကွီးနသေော
အနုပညာရှငျတဈယောကျပီပီ အလုပျတှကေို နားရကျမရှိလုပျကိုငျနရေပမေယျ့သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးအပျေါမှာတော့ တာဝနျကပြှေနျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခုလို ရုပျရှငျရိုကျကူးခွငျးတှေ ရပျနားထားခြိနျမှာတော့ မွငျ့မွတျက
မိသားစုကိုသာ ပိုမိုအခြိနျပေးဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုကို စတငျနပွေီဖွဈတဲ့ မွငျ့မွတျက ညဘကျတှမှောဆိုရငျ Live လှငျ့ဈေးရောငျးရငျး ပရိသတျတှနေဲ့ထိတှလေ့ရှေိ့သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
မွငျ့မွတျက အလုပျအရဈေးရောငျးနပေမေယျ့လညျး တဈဖကျမှာလညျးသားလေး မွတျသူကိုထိနျးရငျး မအားမလပျနိုငျဖွဈနတောကို အခုလိုပဲ တှရေ့ပါတယျ။ မွငျ့မွတျရဲ့သားလေးမွတျသူကလညျးဖဖေအေ့နားကိုအရမျးကပျသူလေးဖွဈပွီး
အဖခေဈြသားလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျးမွငျ့မွတျတို့သားအဖနှဈယောကျရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကကြွမယျထငျပါတယျနျော။
ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ခရကျဒဈ
(၁၉)နှစ်ကြာပေါင်းသင်းပြီးမှ ဇနီးဖြစ်တဲ့သူဟာ မိန်းမအစစ်မဟုတ်ကြောင်းအား သိခဲ့ရသူ
အပျော် ??? ??? ရိုက်တာကို ကွာရှင်းပြီးရူးသွားတာလားမသိဘူး” ဆိုပြီးဝေဖန်ကြတဲ့ သူတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ချမ်းမီမီကို
ကျွန်​​တော်​တို့ရဲ့​မြန်မာနိုင်ငံထဲက ရာဇဝတ်မှု့လုံးဝမရှိတဲ့ ကရင်ရွာကလေးအ​ကြောင်း
လက်ရှိမှာပြင်းထန်လာ​​သော ကိုဗစ်ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဗဟိုစည်ဆေးရုံမှအချိန်ပိုင်း သူနာပြုဆရာမလေး